Tarkii - BBC News Afaan Oromoo
Ijoolleen Musliimaa kumaan lakkaa'amn manneen barnootaa bultii keessatti aadaa biraa baraa jiru.
Preezidantiin Tarkii, Reesiip Tayyiip Erdohaan cidha taphataa kubbaa miilaa beekamaa dhalataa biyyattii, Meesut Oziiliif miinjee ta'an
Filannoon Tarkii akka irra deebi'amu murtaa'uun lammilee oriisise
Paartiin pirezidaanti Erdohaan AK jedhamu harka xiqqaan erga caalamee al-seerummaan keessa jira jechuun mormii dhiyeesse.
Viidiyoon ajjeechaa Kiraayist Chaarch kallaatiin darbaa ture hedduu balaaleffatamuun miidiyaa hawaasummaarraa akka bu'u ta'eera. Maarree Tayiib Erdohaan maaliif hiriiraa deeggarsaa isaaniirratti agarsiisan?
Abdurehim Heyit mana hidhaa Chaayinaa keessa lubbuun jiraachuu viidiyoon bahe agarsiisa
Chaayinaan musiliimota biyya ishee keessa jiran dararuun himatamti.
Ministirri Dhimma Alaa gaaffii Pirezidaantiin Turkii Riikaap Xayyiib Erdogaan torban tokko dura gaafate hin ta'u jedheera.
Pirezedaantiin Ameerikaa gahee ilmi mootichaa ajjeechaa Kaashogjii keessatti qaban irra deebiin gaafatan
Ajjeechaa gaazexeessaa Jamaal Kashogjii ajaja qondaala basaasaa tokkooni malee ajaja ilma mootichaatiin miti jedhe abokaatoon Sawudii.
Sa'uudi Arabiyaan du'a Kaashogjii irratti ragaa dhoksuuf jecha ogeeyyii gara waajjira qoontsilaa isheetti ergitee turte jedhu Aanga'aa Olaanaan Tarkii tokko.
Gaazeexxeessichi akkuma qoonsiilaa Saawudii seeneen akka hudhame, ibsi yeroo jalqabaaf ifatti Tuurkiin kenname addeesseera.
Mohaammada bin Saalmaan: Sawudiin yakkamtoota Kaashoojii ajjeesan ni adabdi jedhan
Ajjechaa gaazexessichaa waliin wal qabatee Turki waliin wal dhabdeen hin uumamu jedhan
Pirezedaantiin Turkii gaazexeessaan Sawudii qeequun beekamu Jamaal Kaashongii kan ajjeefame dursamee itti yaaduun karoorfamee ta'uu ragaan agarsiisu akka jiru bakka bu'oota uummataaf ifa godhan.
Ajjeefamuu gaazexeessaa Sa'uudii Arabiyaa Jamaal Kashoojii irratti dhugaa jiru baasuuf wayita dhiibbaan godhamutti Sa'uudiin gochi raawwatame sirriii akka hin taane dhugaa baate.
Jamaal Kaashogi: Poolisiin Turk reeffa isaa 'daggala keessa barbaadaa jira'
Qondaaltonni Turk reeffi gaazexessaa Jamaal Kaashogi magaalaa Istaanbul ala akka awwaalame amanu.
Achi buutee Jamaal Kaashogi: Yunaayitid Isteet Turkiin ragaa 'ajjeechaa Kaashogi' gaafatte
Qondaaltonni Tarkiin akka jedhanitti gaazexessaan Saa'udii konsilaa Saa'udii Istaanbul keessatti ajjeefame.
Inglizii: Dhimma gaazeexxeessa Jamaal akka layyootti akka hin ilaalle hubbachiifte
Torban darbee keessa Torban darbe keessa baduunsaa gabaafamee kan ture dhimmi gaazeexxeessaa lammii Saa'uudii addunyaarratti gaafii ta'e tureeraa. Dhimma kanas Ingliziin akka yaallootti akka hin ilaalle hubachiifteetti.